INkqubo yeNkxaso yamaGcisa amancinci | Umbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi
Umbutho woNyuselo lweNkcubeko kwiWadi yeOta
Le nkqubo ijolise ekuxhaseni nasekukhuliseni isizukulwana esilandelayo samagcisa ngokubonelela ngamagcisa asemagqabini asemagqabini ngendawo yokuziqhelanisa nemidlalo exhaswa nguMbutho kunye nemisebenzi yosasazo lwenkcubeko nobugcisa kwiWadi yeOta.
Umbutho woPhuhliso lweNkcubeko kwiWadi yeOta uphicotho "lwabaculi bobuhlobo" be "piano" kunye "nomculo wezwi" ukusukela ngo-2018 njengeprojekthi entsha yokuxhasa abadlali abasakhulayo abasakhulayo ikakhulu kwiwadi yase-Ota.
Kwintsimi ye "piano", ikakhulu sidlala kwiikonsathi zekrisimesi zepiyano.
Kwicandelo "lomculo onezwi", ukongeza ekubonakaleni eShimomaruko Uta no Hiroba (eyabanjwa ukusukela ngo-2019 ukuya ku-2020), sikwawatyelele namaziko ezentlalontle ewadini.Kwixesha elizayo, sijonga iindlela ezintsha zemisebenzi "yomculo wezwi."
Uphicotho-zincwadi olulandelayo lucwangciselwe u-2022 kuzo zombini "ipiyano" kunye "nomculo wezwi".
Ikhonsathi yePiyano yeSidlo seAprico